ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 6.7.09
ငြိမ်းအေးတည်ကြည်သောစိတ်ဖြင့် ညပေါင်းများစွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေ။
အေးချမ်းသောညများ နေ့တိုင်း ကြုံတွေ့ပါရစေရှင်
သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်မျာ။ မင်္ဂလာရှိသောညဖြစ်ကြောင်း ကောင်းမြတ်သော ဓမ္မဒါနပါခင်မျာ။
ကိုအောင်ဆွေဦး....အရမ်းကောင်းတဲ. အကောင်းဆုံးည ဆိုတဲ. ဓမ္မဒါနအာတီကယ်လေးပါ၊၊
အကောင်းဆုံးည ဓမ္မဒါနအာတီကယ်ကို ဖတ်ပြီးနောက် နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်း အမူအရာတိုင်း ကို ၀ိပဿနာ အသိနဲ. နေတတ် ဘို. အသိတရားကို ပိုပြီးခိုင်မာစေပါတယ်၊၊
သာဓု သာဓု သာဓု၊၊